Dantaa Abdi Ilee fi Wayyaanee walitti hiite! Dantaa Jimaati – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDantaa Abdi Ilee fi Wayyaanee walitti hiite! Dantaa Jimaati
Dantaa Abdi Ilee fi Wayyaanee walitti hiite!
Tokko daldala jimaati. Akka ‘addis insight’ gabaasetti bara 2016 qofa Jimaa alatti erguun Itoophiyaan doolaara milyoona 840 galchite. Daldalli Jimaa kunis Abdi Ilee fi Azeeb Masfiniin kan dhuunfatameedha. Keessattu naannoo Somaalee fi Somaalilaandii keessatti jaratu hira. Daldala kana keessa kotorbaandistootni faayidaa guddaa argatu.
Dantaa Liyyuu Poolisii:
Liyyuu Poolisii akka daldalaatti itti dhimma bahu. Lakkoofsaan gara kuma 30 olii kan ta’an nyaata, kophee, uffata fi meeshaa adda addaa waan barbaachisuuf maqaa kanaatiin kontiraata daldalaa irratti adeemsisu. Kanarraa irra caalaatti kan faayidaa argatu Jeneraal Abrahaa fi firoottan isaati.
Dantaa Maallaqa Miliqsuu fi kotorbaandii:
Abdi Ileen maallaqa jeneraalota Wayyaanee karaa Somaalilaandii fi Somaaliyaatiin biyya alaatti dabarsuuf jara gargaaraa ture. Maallaqa karaa kanaan baasanii biyya alaatti kuufachaa turan.
Dantaa Pirojaktii Gaaza Baasuu:
Naannoo Somaalee bakka ‘Calub’ fi ‘Hillala’ jedhamtutti gaazni argame. Pirojaktii gaaza kana baasuuf baankiin addunyaa bara 1994 keessa doolaara milyoona 74.31 kenne. Dabalataanis kaampaanonni gaazaa kan Chaaynotaa doolaara bilyoona 4 irratti dhangalaasan gaaza san baasuuf. Kana hunda kan irraa faayidoomu jeneraalota Wayyaaneeti.
Walumaa galatti qabsoon Oromoo dantaa jaraa kana miite. Oromoon qabeenya isaa gaafa eeggate, gaafa daangaa isaa tikfatee kotorbaandistoota hoongosse hojiin jaraa dhaabbate jechuudha. Sababa kanaaf cichanii Abdi Ilee waliin dhaabbatan.
Qorannaa godhee hojii isaanii kana kan saaxile, garee ‘Karamarda’ jedhamuudha.
Manni barnootaa kun dhuguma Afaan oromoo barsiisuuf moo ijoollee joorsuuf deema…?